Entana aondrana na hafarana : nitombo avo roa heny ny saram-pikarakarana aloa | NewsMada
Entana aondrana na hafarana : nitombo avo roa heny ny saram-pikarakarana aloa
Tafakatra 20 tapitrisa Ar raha 9 tapitrisa Ar ny saran’ny fikarakarana antontan-taratasy hanondranana na hamoahana entana avy any ivelany eny amin’ny ladoany. Mety hihena ny isan’ireo orinasa “transitaires” misahana izany, satria havaozina ny fanomezan-dalana azy ireo.
Araka ny fanazavan’ireo mpikarakara ny famoahana na fandefasana entana avy any ivelany (transitaires), misy ny sivana ataon’ny sampandraharahan’ny fadin-tseranana ankehitriny. Ao anatin’izany ny fanondrotana avo roa heny ny saran’ny fikarakarana ny antontan-taratasy . Misy karazany roa ireo vola aloa ireo, ka tafakatra avo roa heny mahery. 20 tapitrisa Ar ny ho an’ny ladoany (caution douanière) raha toa ka 9 tapitrisa Ar teo aloha. Vola raikitra io sady tsy averina.
Niakatra ho 20 tapitrisa Ar koa ny aloa any amin’ny banky (caution bancaire) raha toa ka 15 tapitrisa Ar taloha. Isaky ny misy entana tonga na halefa ny handoavana ity ho an’ny banky ity eny amin’ny masoivohon’ny ladoany.
Fe-potoana farany ny febroary 2016
Mitaraina ireo “transitaires” fa maro amin’izy ireo tsy manana mpanjifa maro karakaraina ao anatin’ny iray volana, nefa tsy maintsy aloa ireo volabe ireo. Manampy ireo, mila mandoa hatrany amin’ny 80 tapitrisa Ar raha toa ka manana raharaha karakaraina eny amin’ny ladoany eny amin’ny seranan’Ivato, Mamory Ivato, Antanimena, seranan’i Toamasina ireo mpandraharaha ireo.
Ankoatra ireo, amin’ny faran’ity volana febroary ity ny fe-potoana farany, hanavaozana ny fangatahana fahazoan-dalana ho “transitaires”. Misy karazany roa izy ireo: ny miasa ho an’ny orinasa na commissionaire agree eny douane (CAD), afaka mikarakara ny entan’ny orianasa samihafa. Faharoa, ny Transit maison miasa ho an’ny orinasa tompon’entana ihany.